Graphics - Famolavolana
Kara-Panoratana Ny ravina dia karatra misy hafatra izay misy sary mihetsika miparitaka. Hamirapiratra ireo hafatrao amin'ny alàlan'ny maintso maintso-taonany. Tonga amin'ny andiany karatra efatra samihafa misy valopy efatra. Ny famolavolana kalitao dia manana fahefana hanova ny habaka sy hanova ny sain'ireo mpampiasa azy. Manome fampiononana amin'ny fahitana, mitazona ary mampiasa izy ireo. Mihena izy ireo ary singa manaitra, manatsara toerana. Ny vokatra tany am-boalohany dia natao tamin'ny fampiasana ny foto-kevitry ny fiainana miaraka amin'ny Design.
Ny Kalandrie Ny kitapom-bolan'ny ZOO dia mora atambatra. Tsy mila lakaoly na hety. Angony amin'ny alàlan'ny fizarana miaraka amin'ilay marika mitovy. Ny biby tsirairay dia alimanaka roa volana. Ny famolavolana kalitao dia manana fahefana hanova ny habaka sy hanova ny sain'ireo mpampiasa azy. Manome fampiononana amin'ny fahitana, mitazona ary mampiasa izy ireo. Mihena izy ireo ary singa manaitra, manatsara toerana. Ny vokatra tany am-boalohany dia natao tamin'ny fampiasana ny foto-kevitry ny fiainana miaraka amin'ny Design.
Kalandrie Safari dia alimanaka vita amin'ny biby. Esory sy angony ny sheet 6 miaraka amina kalandrie isam-bolana eo amin'ny lafiny. Aforeto ny vatana sy ny tonon-tafo miaraka amin'ny tahom-baravarana, jereo ireo marika eo amin'ny tonon-taolana ary mifanambana araka ny aseho. Ny famolavolana kalitao dia manana fahefana hanova ny habaka sy hanova ny sain'ireo mpampiasa azy. Manome fampiononana amin'ny fahitana, mitazona ary mampiasa izy ireo. Mihena izy ireo ary singa manaitra, manatsara toerana. Ny vokatra tany am-boalohany dia natao tamin'ny fampiasana ny foto-kevitry ny fiainana miaraka amin'ny Design.
Haingon-Tsosotra Ilay volamena volamena miloko marevaka. Black Edition ”nandova ny endriny manokana avy amin'ny kanto folk Lithuanian. Ny Rhombus sy ny herringbones, izay natambatra tamina kianja kely, dia tena fahita matetika amin'ny zavakanto folk Lithuanian. Na dia misy endrika maoderina kokoa aza ny fanondroana ireo tariby nasionaly ireo dia niova ho zavakanto maoderina ny fisaintsainana mistery taloha. Ny loko volamena sy mainty be dia be dia manasongadina ny fomba fametrahana vodka miavaka amin'ny alàlan'ny sivana sy volamena sivana. Izany no mahatonga ny "Goldka vodka Litoanianina. Black Edition ”mazava sy kristaly mazava tsara.
Ny Kalandrie Mamolavola efitrano iray, ento amin'ny fizaran-taona - Ny alimanaka ny voninkazo dia misy volavola vaorao misy voninkazo 12 samihafa. Hamirapiratra ny fiainanao isam-bolana amin'ny voninkazo faran-taona. Ny famolavolana kalitao dia manana fahefana hanova ny habaka sy hanova ny sain'ireo mpampiasa azy. Manome fampiononana amin'ny fahitana, mitazona ary mampiasa izy ireo. Mihena izy ireo ary singa manaitra, manatsara toerana. Ny vokatra tany am-boalohany dia natao tamin'ny fampiasana ny foto-kevitry ny fiainana miaraka amin'ny Design.
Ny Labels Propeller dia fitambaran'ny fanahy avy amin'ny faritra maro eran'izao tontolo izao, mifandraika amin'ny lohahevitry ny fitsangatsanganana fiaramanidina ary mpandeha mpanamory fiaramanidina ho marika marika. Ny endri-javatra isan-karazany amin'ny zava-pisotro dia aseho amin'ny alàlan'ny sary marobe, soratra voasoratra tahaka ny tsipika amin'ny fiaramanidina sy ny fanaovana sketsika izay soso-kevitra amin'ny alikaola. Ny famolavolana multifaceted dia mifangaro amin'ny feon-javony maro karazana, lacquers samihafa, modely ary embossing.
Kara-Panoratana Ny Kalandrie Kalandrie Haingon-Tsosotra Ny Kalandrie Ny Labels